Jumlo 140cm Ciyaartoyga miiska leh lugaha T shpe iyo suufka mouse Model LY 140cm soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Laba-qarxin
140cm miisaska ciyaarta leh lugaha T shpe iyo suufka mouse Model LY 140cm
Dhammaystirka alaabta guriga:Carbon fiber
Casri fudud oo adag oo waayo-aragnimo ciyaar fiican leh!
1. Nalalka LED-ka ee miiska ciyaaraha waxay abuuraan jawi ciyaar aan caadi ahayn.
2. Mashruuc ballaadhan oo 55 inch ah miiska ciyaaraha ayaa ku filan in la dhigo 3 kormeerayaal.
3. MDF desktop-ka siman waa mid aan biyuhu lahayn oo xoqan u adkaysta.
4. Qaabka T-qaabeeya ee miiska ciyaaraha kombayuutarku waa mid deggan oo waara.
5. Ma jiro bar toosan oo miiska hoostiisa ah si aad lugahaaga uga ilaaliso saamaynta shilalka ah.
6. Dhammaan naqshaduhu waa ergonomic iyo hawlo badan.
Waxaan rabnaa inaan hubinno inaan naqshadeyno oo aan soo saareyno miisaska ciyaaraha ugu fiican Amazon.Waxaan leenahay warshadeena wax soo saarka taasoo ku faanta naqshadeena cusub, imtixaan adag iyo habka wax soo saarka heer caalami.
55 Inj Large Desktop
Dhig miiskan ciyaaraha ee shaqaynaya qolkaaga ciyaarta, gurigaaga, xafiiska, goobta shaqada, waxbarashada, qolka fadhiga, ama meel kasta oo aad rabto inaad ku ciyaarto, ku shakhsiyayso goobtaada ciyaar ee miiska ciyaaraha.
• Naqshad Qaab T-qaab ah: Dhisme la awoodi karo & Dhisme Adag
• Cabbirka miiska: 55" (W) x 23.6" (D) x 29.5" (H) / 140*60*75cm
Hababka Iftiinka 8 RGB
• Si Fudud Oo La Iskugu Soo Duubo
• suufka Mouse-ka ee Miis buuxa oo Weyn
• Lugaha miiska la hagaajin karo
• Miiska dushiisa ee fiber-ka-karboonka ah ee dahaaran: biyuhu-mareenka, xoqitaanka lidka ku ah
• Ku-haystaha taleefoonka dhegaha ee ku habboon & nidaamka maareynta fiilada
ILAALINTA FIBER OPTIC RGB LA kontorooli karo
1. Loogu talagalay gamers: TwoBlow gaming panel panel wuxuu la yimaadaa nalalka LED-ka ee fiber optic rgb, waxay abuurtaa jawi ciyaareed immersive.
2. Qalabka Tayada Sare ee aadka u sarreeya: Maaddada asaasiga ah ee indhaha oo lagu daboolay caagagga injineernimada ee ololka ah ee xoogga leh ee hufan kaas oo hubin kara in aysan jiri doonin dhibaatooyin tayo leh sida jajabinta iyo qallafsanaanta muddo dheer.
3. Qaababka Iftiinka Badan: 8 Midab Keli ah, 8 Midab Keliya Bedelida, Nalalka RGB oo Bedelaya & Iftiinka Strobe.
4. Tayada oo dhan: Dusha sare ee Kaarboon Fiber iyo iftiinka RGB LED si loo muujiyo aqoonsiga cayaaryahankaaga, TwoBlow waa qaali gudaha iyo dibaddaba.
Qaabka Ciyaarta Guud
Miiska ciyaaraha ee TwoBlow wuxuu dhexgeliyaa farsamada casriga ah ee dhabta ah, u rogo khiyaali nolosha, u oggolow ciyaaryahan kasta inuu ku lug yeesho ciyaarta adduunka, ciyaaryahan kasta ha la kulmo adduunka ciyaarta xitaa guriga.
Xafiiska Arrimaha Gudaha
Ku samee booska xafiiska ugu fiican miiska ciyaaraha ee ESGAMING.Dusha sare ee miiska meel-badbaadinta waxay siinaysaa qol badan oo kormeerahaaga ah ama laptop-kaaga, iyo sidoo kale waraaqaha iyo agabyada kale ee muhiimka ah ee xafiiska.Naqshadaynta quruxda badan ayaa ka dhigaysa miiskan mid ku habboon xafiis kasta oo guri.
Khibrad shaqo oo wanaagsan
Deegaanka shaqada ee dabacsan ayaa kuu ogolaanaya inaad yeelato khibrad shaqo oo wanaagsan.Waxay hoos u dhigtaa halista dhabar xanuunka, macaanka, dhibaatooyinka wadnaha, buurnaanta iyo dhibaatooyinka kale ee jirka marka ay u kala beddesho fadhiga iyo istaagga.
Maaraynta Cable Grommets
Iyada oo leh 2 godadka maaraynta fiilada ee bidix iyo midig, oo ku habboon rakibidda fiilada
U dhashay ciyaaraha, miiskan ciyaaruhu waxa uu ku siinayaa ciyaar ku haboon iyo jawi shaqo.
• 1 x RGB Miiska Ciyaaraha
• 1x Jiirka oo si buuxda u daboolan
• 1x koob haysta
• 2x dhegaha dhegaha
1x Kaydinta Alaabta
• 1 x Deked USB ah
1x Qalabka Rakibaadda
1x Ku rakib warqad tilmaame
Cabirka Alaabta 55 x 23.6 x 29.5 inji/ 140*60*75cm
Miisaanka Shayga 49 rodol
Soo saaraha Laba garaac
Nambarka nooca shayga LY140
Hore: RGB Gamer Desk oo leh nooca kontoroolka fog fog ee ZA
Xiga: R qaabaynta dhaqaalaha miiska ciyaaraha GT-01